Iindaba -Imbali yaseFujian kunye neZityalo eziThunyelwa kumazwe angaphandle ziya kuvuka ngo-2020
Iintyatyambo zeFujian kunye neZityalo ezithunyelwa kwelinye ilizwe zikhula ngo-2020
Isebe lezamahlathi laseFujian lidize ukuba ukuthunyelwa kweentyatyambo nezityalo kwamanye amazwe kufikelele kwi-US $ 164.833 yezigidi ngo-2020, ukonyuka nge-9.9% ngaphezulu kwe-2019. Iphumelele "ukuguqula iingxaki zibe ngamathuba" kwaye ikwazile ukukhula ngokuthe ngcembe kubunzima.
Umntu ophetheyo kwiSebe lezamaHlathi laseFujian wathi kwisiqingatha sokuqala sika-2020, esichaphazeleka sisibetho se-COVID-19 ekhaya nakumazwe aphesheya, imeko yorhwebo lwamanye amazwe yeentyatyambo kunye nezityalo sele inzima kakhulu kwaye inzima. Intyatyambo kunye nezityalo ezithunyelwa kwelinye ilizwe, ebezisoloko zikhula ngokuzinzileyo, zichaphazele kakubi. Kukho ukubuya umva kwenani elikhulu leemveliso ezithunyelwa ngaphandle ezinje nge-ginseng ficus, sansevieria, kunye neengcali ezinxulumene noko ziye zalahleka kakhulu.
Thatha iSixeko saseZhangzhou, apho intyatyambo kunye nezityalo ezithunyelwa ngaphandle zonyaka zingaphezulu kwe-80% yezityalo zephondo ezithunyelwa ngaphandle njengomzekelo. Ngomhla wango-Matshi ukuya kuMeyi wonyaka ophelileyo yayilixesha eliphakamileyo leedolophu kunye nezityalo zokuthumela kwelinye ilizwe. Umthamo wokuthunyelwa kwamanye amazwe ubalwe ngaphezulu kwesibini kwisithathu semali ithunyelwe kumazwe angaphandle ngonyaka. Phakathi kuka-Matshi noMeyi 2020, ukuthunyelwa kweentyatyambo kwesi sixeko kwehle phantse ngama-70% xa kuthelekiswa nexesha elifanayo ngo-2019. Ngenxa yokunqunyanyiswa kweenqwelomoya, ukuthunyelwa kunye nolunye ulungiselelo, intyatyambo kunye nezityalo ezithunyelwa kwamanye amazwe kwiPhondo laseFujian zineodolo malunga ne-USD. Izigidi ezingama-23.73 ezingafezekanga ngexesha kwaye zijongane nomngcipheko omkhulu wamabango.
Nokuba kukho inani elincinci lokuthumela ngaphandle, bahlala behlangabezana nezithintelo zomgaqo-nkqubo wokungenisa amazwe kunye nemimandla, kubangela ilahleko engalindelekanga. Umzekelo, i-India ifuna iintyatyambo nezityalo ezingeniswe e-China zibekwe zodwa malunga nesiqingatha senyanga ngaphambi kokuba zikhutshwe emva kokuba zifikile; I-United Arab Emirates ifuna iintyatyambo nezityalo ezingeniswe e-China zibekwe zodwa ngaphambi kokuba ziye elunxwemeni ukuze zihlolwe, nto leyo eyandisa kakhulu ixesha lokuhamba kwaye ichaphazele kakhulu izinga lokusinda kwezityalo.
Kude kube ngoMeyi 2020, kunye nokuphunyezwa kwemigaqo-nkqubo eyahlukeneyo yokuthintela kunye nokulawula ubhubhane, uphuhliso lwentlalo noqoqosho, imeko yothintelo lobhubhane lwasekhaya kunye nemeko yolawulo iye yaphucuka ngokuthe ngcembe, iinkampani zezityalo ziye zaphuma ngokuthe ngcembe kwifuthe lobhubhane, kunye neentyatyambo nezityalo Ukuthunyelwa kwelinye ilizwe kuye kwangena kumkhondo olungileyo kwaye kufezekisiwe ukunyuka ngokuchasene nendlela kwaye babetha ukuphakama okutsha rhoqo.
Kwi-2020, intyatyambo kunye nesityalo esithunyelwa ngaphandle sikaZhangzhou sifikelele kwi-US $ 90.63 yezigidi, ukwanda nge-5.3% ngaphezulu kwe-2019. Ezona mveliso ziphambili zokuthumela ngaphandle ezinje ngeginseng ficus, sansevieria, pachira, anthurium, chrysanthemum, njl. izithole zenkcubeko yazo "kunzima ukuzifumana kwisitya esinye."
Ukuphela kwe-2020, indawo yokutyala iintyatyambo kwiPhondo laseFujian yafikelela kwi-1,421 yezigidi ze-mu, ixabiso lilonke lemveliso yecandelo laliyi-106.25 yezigidigidi ze-yuan, kwaye ixabiso lokuthumela ngaphandle laliyi-164.833 yezigidi zeedola zase-US, ukonyuka kwe-2.7%, 19.5 % kunye ne-9.9% ngonyaka-ngokulandelelana.
Njengendawo ephambili yemveliso yokuthumela ngaphandle izityalo, intyatyambo kunye nezityalo ezithunyelwa ngaphandle zikaFujian zigqithile eYunnan okokuqala kwi2019, ikwindawo yokuqala eChina. Phakathi kwabo, ukuthunyelwa ngaphandle kwezityalo ezinamanzi kuhleli kungowokuqala kwilizwe iminyaka eli-9 ilandelelana. Kwi-2020, ixabiso eliphuma kuyo yonke intyatyambo kunye nezithole zembewu liya kudlula kwi-1 000. Izigidi ezili-100 ze-yuan.